TIDE: Imekọ ihe ọnụ, Nsonye, ​​Nnọchite, Mmetụta | Martech Zone
M na-agụ akwụkwọ ole na ole n'oge na-adịbeghị anya (n'aka nri). Akwụkwọ abụọ a bụ nnukwu akwụkwọ iji merie ụfọdụ akụkụ adịghị mma nke azụmaahịa.
Nke a bụ oge nke abụọ m na-agụ “Love is the Killer App”. Aga m agụ ya kwa ọnwa ọ bụla. Achọrọ m iche banyere ya dị ka 'hippy' nke akwụkwọ azụmaahịa. Ọ bụ n'ezie maka ịme mmekọrịta dị ukwuu na ndị ahụ gbara gị gburugburu. Na-echegbu onwe gị gbasara ndị mmadụ na mbụ, ị gaghị echegbu onwe gị gbasara azụmahịa gị.
Silos, Ọchịchị na Turf Wars bụ akwụkwọ magburu onwe ya. Ọ bụ n'ezie maka ịdọpụ uche nke ndị ọrụ gị na ibe gị yana itinye uche ha n'ihe mgbaru ọsọ nke nzukọ a.
Abịara m jiri akara aka m nke gosipụtara akwụkwọ abụọ ahụ ID
Rụkọ ọrụ ọnụ - na-arụ ọrụ dị ka otu egwuregwu na-enye zuo-na arụmọrụ. Kwụsị usoro ndị na-akwalite esemokwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ndị mmadụ enweghị ike ịrụ ọrụ na otu anaghị achọ ụlọ ọrụ, ha na-achọ onwe ha. Iku ma kwalite ndị egwuregwu otu.
Nsonye - gụnyere ndị ahịa gị (n'ime na mpụga) ga-emeziwanye ngwaahịa na ọrụ gị.
Ndị nnọchi anya - hapụ ndị ọkachamara ị goro ka ha mee mkpebi ma zaa ha ajụjụ.
Mmetụta ọmịiko - ghọta ụzọ mgbochi, isi ihe mgbu, na adịghị arụ ọrụ na nzukọ ma nwee ọmịiko na ndị ahịa na ndị ọrụ ahụ ga-anagide ha.